July Dream: WBDD Briefing Session
To thank you for your ongoing support, we would like to invite you to celebrate World Blood Donor Day 2008 with us! This year, it’s at the Singapore Zoo – 14 June from 9am to 5pm.
This event is celebrated all over the world, in recognition of the voluntary and selfless contribution of the many people who donate blood regularly. So bring your family and friends, enjoyaday at the zoo and be sure to have your photo taken with our mascot, “Blood Buddy”.
အခုတလော ညပိုင်းအလုပ်ဆင်း မနက်ပိုင်း အိပ်နေရတာနဲ့ လူလည်း နေ့နဲ့ညနဲ့ လွဲနေပါတယ်။ ညဆို ၂ နာရီ ၃ နာရီအထိ အလုပ်လုပ် ပြီးရင် အိပ်၊ နောက်တစ်ရက်ဆို ၁၂ နာရီခွဲမှ အိပ်ရာထ ညနေ ၄ နာရီလောက် ရုံးပြန်သွားနဲ့ လူလည်း ဒေါင်ချာစိုင်းနေတယ်။ ဒီအပတ် စနေနေ့မှာ World Blood Donor Day ပွဲအတွက် အစည်းအဝေး ၁၁ နာရီမှာ ရှိတယ်ဆိုတော့ သောကြာနေ့ညမှာ စောစော အိပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရုံးကနေ ၁၁ နာရီလောက်ပြန်လာ၊ အိမ်မှာ အလုပ် ဆက်လုပ်... ဒါနဲ့ပဲ ည ၁ နာရီခွဲကျော်မှ အလုပ်ပြီးတာနဲ့ အိပ်ရာဝင်ဖြစ်သွားတယ်။
မနက် ကိုးနာရီထိုးတော့ ဖုန်းဆက် လှမ်းနှိုးတဲ့လူ ရှိတာနဲ့ အိပ်ရာထဖြစ်သွားတယ်။ ရေမိုးချိုး အ၀တ်စားလဲပြီး ရထားဘူတာကို ပြေး... သွေးလှူဘဏ်ကို ၁၁ နာရီ မထိုးခင် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာတော့ လူက အတော်များသား။ ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှာ NUS Red Cross Chapter၊ Polytechnic ကျောင်းတွေ၊ ITE ကျောင်းတွေက Volunteer တွေလည်း ခေါ်ထားပါတယ်။ Blood Donor Club နဲ့ Youth Donor Club က လူတွေကတော့ ပင်တိုင်ပဲဆိုတော့ အတော်များများ အစည်းအဝေးမှာ ရှိနေကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ World Blood Donor Day ရောက်တဲ့အခါကျရင် Singapore Zoo မှာ လုပ်မယ့်ပွဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ Volunteer အဖွဲ့လိုက် ဘာတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်။
သွေးလှူရှင်တိုင်းကို အခု အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ပို့စ်ကဒ်လေးတစ်စောင် ပို့ပေးပါတယ်။ ပို့စ်ကဒ်တွေက သွေးလှူရှင်တွေကိုပဲ ပေးတာဖြစ်ပေမယ့် Zoo ရောက်ရင် သွေးလှူရှင် တကယ်ဟုတ်မဟုတ် လုံးဝ မစစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သွေးမလှူဖူးလဲ စိတ်မပူကြပါနဲ့။ ပို့စ်ကဒ်လေးသာ အပါယူခဲ့ကြပါ။ ပို့စ်ကဒ်လေး ပြလိုက်ရုံနဲ့ ၀င်ခွင့်လက်မှတ် ၂ စောင် နဲ့ Discount Card တစ်ခု ကို Ticket Session မှာ ထုတ်ယူရပါမယ်။ Discount Card မှာ Blood Buddy အရုပ်ကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံ ၁ ပုံ အခမဲ့ တွဲရိုက်ခွင့်လည်း ပါပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံ ၁ ပုံ အခမဲ့ ပေးမယ့် Sponsor ကတော့ HP ကပါ။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးရင် Zoo ထဲကို အရင် ၀င်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ အမျိုးတွေ ကြည့်ကြပေါ့။ အမျိုးတွေကို နှုတ်ဆက်လို့ စုံပြီဆိုရင်တော့ အပြင် ပြန်ထွက်လာပြီး ဓါတ်ပုံရွေးပြီး အိမ်ပြန်ကြပေါ့။ ဓါတ်ပုံကူးတာကိုတော့ ထိုင်စောင့်နေရင် အချိန်ကုန်မယ်လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုချိန်ထိ လာမယ့်သူက ၈၀၀၀ ကျော် စာရင်းသွင်းထားပါတယ်။ လက်မှတ်တိုင်းက ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပေးထားတော့ အတော်များများက အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဓါတ်ပုံရဖို့ဆိုတာ အတော်လေး အချိန်ပေးရမှာဖြစ်လို့ Zoo ထဲမှာ လျှောက်လည်ဖို့ အရင် လုပ်ခိုင်းတာပါ။
အကယ်လို့များ ကိုယ့်မှာ ပို့စ်ကဒ် တစ်ခုပဲ ရှိပြီး လိုက်လာတဲ့သူက ၃ ယောက်ဖြစ်နေရင် ပိုနေတဲ့ ၁ ယောက်အတွက် လက်မှတ် ၀ယ်ရပါမယ်။ ဈေးဆစ်ပြီး ရောဝင်လို့ ရမယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။ လက်မှတ်အပို ပေးဖို့ အစီအစဉ် လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အကယ်လို့များ ကလေးတွေ ပါလာရင် ကလေးလက်မှတ်ကို ၀ယ်ပြီး လူကြီးတွေက သွေးလှူရှင်ကိုပေးတဲ့ အခမဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ ၀င်ကြပေါ့။ ကလေးလက်မှတ်က လူကြီးလက်မှတ်ထက် သက်သာပါတယ်။
Zoo ကို မနက် ၉ နာရီမှာ စတင်ပြီး ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ညနေ ၆ နာရီမှာတော့ Zoo ပိတ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ၄ နာရီလောက် နောက်ဆုံးထား လာမှ အမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အချိန်ရမှာပါ။ ၆ နာရီထိုးခါနီးမှ ကပ်လာရင် ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ပြီးတာနဲ့ အပြင်ကို ပြန်ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ ၀င်ခွင့်လက်မှတ်တွေက တစ်ကြိမ်တည်း အသုံးပြုခွင့် ပေးထားတာပါ။ ၀င်လိုက် ထွက်လိုက် လုပ်လို့မရပါဘူး။ လုပ်အားပေးတဲ့ Volunteer တွေတောင် ၀င်လိုက် ထွက်လုပ် လုပ်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တာဝန်ကျတဲ့ နေရာမှာပဲ နေရမှာပါ။
အထဲမှာတော့ Champion Blood Donor Recognition Ceremony ကို မနက်ပိုင်း တစ်ချိန်၊ ညနေပိုင်း တစ်ချိန် လုပ်ပါမယ်။ မနက်ပိုင်းမှာတော့ Bronze Medal နဲ့ Silver Medal သွေးလှူရှင်တွေ... ညနေပိုင်းမှာတော့ Ruby Medal နဲ့ Gold Medal သွေးလှူရှင်တွေကို ဂုဏ်ပြုမှာပါ။ ညနေပိုင်းပွဲမှာတော့ စင်္ကာပူ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး လာမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီလို ဆုရတဲ့ သွေးလှူရှင်တွေကျတော့ အခမ်းအနားကို တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်မှီရောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ ဆုယူမယ့်သူတွေက ညနေပိုင်းမှ လည်ကြပေါ့။ ညနေပိုင်း ဆုယူမယ့်သူတွေက မနက်ပိုင်းမှာ လည်ကြပေ့ါ။ သွေးလှူတဲ့အကြိမ် ၂၅ ကြိမ်အောက် ဖြစ်နေသေးလို့ ဆုမချိတ်သေးတဲ့ သာမာန် သွေးလှူရှင်တွေကတော့ အဲဒီပွဲကို တက်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Zoo ထဲမှာ လျှောက်လည်လို့ရပါတယ်။
ကဲ... ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့World Blood Donor Day ကို Singapore Zoo မှာ မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ချစ်သူတွေနဲ့အတူ အမျိုးတွေကြားမှာ ဆွေပြမျိုးပြ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေဗျာ။